Sikufisela amaholide amahle Jabulela unyaka omusha | Kusuka kuLinux
Yize abaningi lapha singatholi lutho olukhethekile ngoKhisimusi, noma ngoNcibijane, noma ngoNyaka Omusha, asikwazi ukungazinaki lezi zinsuku futhi KusukaLinux ikufisela amaholide amahle kanye no-2014 ochumayo ngale ncwajana emfushane.
Sibe nonyaka omangalisayo. Okufanele kakhulu ngokungangabazeki kube ukwamukelwa nokunemba hlangana ne-UsemosLinux, esengeza ngayo ubukhona bozakwethu nomngani wethu UPablo Castagnino.
Sifuna ukunibonga nonke, bahleli, abahlanganyeli, abafundi, enibenza ngandlela thile KusukaLinux amanye amabhulogi akhuluma kahle kakhulu eSpanishi enetheni.
Umphakathi wethu ukhulile, futhi sifake amalungu amasha ngokungangabazeki azosisiza ukuthi siqhubekele phambili.
Ngonyaka olandelayo sithemba ukubuya namaphrojekthi amasha, izindatshana ezithokozisayo, ezisezingeni, nezemfundo ezisivumela ukuthi sikhule futhi sibe ngcono kukho I-GNU / Linux.
Ukwanga: Ithimba leLinux
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » KusukaLinux » Sikufisela amaholide amahle! Jabulela unyaka omusha
Jabulela unyaka omusha kubo bonke abantu bebhulogi
Ukhisimusi omuhle neminyaka emisha wonke umuntu! = D
Hhayi-ke, yini enye engashiwo, Unyaka Omusha Ojabulisayo bese uyigcina, ngenxa yakho nginqume ukushintshela ku-Linux ngishiye iWindows.
Jabulela unyaka omusha !! Futhi ulwazi olusha oluphumelelayo 🙂
Siyabonga ngezincomo, ubuhlakani! Ukujoyina i-DL ne-UL bekuyinto enhle kakhulu ebingenzeka, izandla phansi.
A hug kuwo wonke umuntu futhi ujabule unyaka omusha!
ps: sizoqala u-2014 ngendikimba entsha ???
Hahahaha .. Hhayi, angicabangi ukuthi itimu entsha, kodwa eyodwa ethuthukisiwe .. Ayikho iPablito? I-LOL
Futhi bazokhipha izihloko ezedlule ezizosetshenziswa ngamanye amabhulogi? Uma kunjalo, ngizobhalisa.
Amaholide amahle kuwo wonke umuntu.
Jabulela amaholide abantu! impumelelo enkulu kulo nyaka ozayo ...
Ingabe ekugcineni kuzoba unyaka weLinux?
Jabulela unyaka omusha nonke, eniwuzuzile, okwenza le bhulogi ibe enye yezindawo ezivakashelwa kakhulu ngabasebenzisi beLinux abakhuluma iSpanishi futhi yithi sonke esiba nesikhathi esincane lapha eCuba.
Ngiyabonga Elav ………… Sanibonani nonke Kusuka kubasebenzisi beLinux namaholide ajabulisayo …… ukuthi ngonyaka we-2014 umphakathi wethu uyaqhubeka nokukhula kakhulu ……… Jabulela unyaka omusha !!!
Ukhisimusi omuhle nonyaka omusha ojabulisayo kubo bonke ...
Impela ukuhlangana ne-Usemoslinux bekuhamba phambili onyakeni, ngokwengxenye ngoba isayithi likhule kokuqukethwe nabanikeli. Jabulela unyaka omusha Abangane.
Halala kubo bonke abantu, ngaphandle kokungabaza, enye yezingosi ezihamba phambili kwi-intanethi, lapho ngifunde khona okuningi nge-GNU / Linux.
Amaholide amahle kuwo wonke umuntu!
Siyanihalalisela sonke esiyingxenye yalokhu! Sithemba ukuthi ibhulogi iyaqhubeka nokukhula futhi ithuthuke!
Amaholide amahle kuwo wonke amaqembu nabasebenzisi be-From Linux, kwangathi u-2014 angakulethela okuhle kakhulu.
Unyaka Omusha Ojabulisayo namaholide ajabulisayo kubo bonke abavela kwaLinuxeros!
Sikufisela inhlanhla nempumelelo kubaphathi abenza iDesdeLinux ibe nokwenzeka, iqhubeke ngonyaka ozayo nokunye okuningi ...
Ngokufanayo nabantu, amaholide amahle kuwo wonke umuntu
Siyakuhalalisela u-Elav, u-Alejandro, uPablo, u-Elio nalo lonke iqembu !!!. Ube noNyaka Omusha omuhle kakhulu futhi ube noNyaka Omusha ochuma kakhulu.
Halala ngoKhisimusi nonyaka omusha ojabulisayo: D!
Jabulela unyaka omusha 🙂
Halala kubo bonke, ngibonile izindatshana ezinhle kakhulu, ukucabanga okuthakazelisa kakhulu, leli yikhasi elihle.
Sikufisela unyaka omusha omuhle kulo lonke iqembu le-Desdelinux.
Sikufisela unyaka omusha omuhle, ngiphinde ngafika lapha ngisebenzisa i-usemoslinux, imikhonzo evela kuStgo de Chilito
I-ArchLinux: Faka ku-Raspberry Pi